ဖောက်သည်တော်များ၏ စိတ်ကူးအကြံဥာဏ်များ အကြံပြုတင်ပြချက်များကို မကြာခဏဆိုသလိုပဲ FBSအနေနဲ့လက်ခံရရှိပါတယ်. ထိုကဲ့သို့စိတ်ဝင်တစားနဲ့ အကြံပြုချက်တွေကိုပေးပို့ကြတဲ့အတွက်လည်း ကျွန်ုပ်တို့မှတကယ့်ကိုပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်. ထိုကဲ့သို့အကြံပြုချက်တွေထဲကမှ အကောင်းဆုံးလို့ပြောရမယ့် အကြံပြုချက်ကတော့ အကောင့်အမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီမှာ နောက်ထပ်အကောင့်တွေထပ်မံတိုးဖွင့်ပေးရင် အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ရာမှာ ပိုမိုအဆင်ပြေမယ်ဆိုတဲ့ အကြံပြုချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်.
အခုဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ အကောင့်အမျိုးအစားတစ်ခုတည်းကိုပဲ အကောင့်အရေအတွက် ဆယ်ခုအထိထပ်ဖွင့်လို့ရပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းကို ပြောပြခွင့်ရတဲ့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့က လွန်စွာမှပဲပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်. သတိပြုရန်, အကောင့်အသစ်ဖွင့်ရန် ဖွင့်မည့်အကောင့်အမျိူးအစားထဲသို့ ယခင်ကတည်းက အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ၁၀၀ ထည့်သွင်းထားခဲ့ပြီးဖြစ်ရပါမည်.
နောက်ထပ်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အစီအစဉ်ကိုလဲ ဖန်တီးလုပ်ဆောင်ပေးထားပါသေးတယ် - သင့်ရဲ့ ဆင့်အကောင့်တွင် ဖွင့်နိုင်သောအရောင်းအ၀ယ်အော်ဒါအရေအတွက်ကို နှစ်ဆတိုးမြှင့်ပေးထားပြီဖြစ်ပါတယ်. အခုဆိုရင်တော့ သင့်အနေနဲ့ ဆင့်အကောင့်မှာ အရောင်းအ၀ယ်အော်ဒါ ၂၀၀အထိဖွင့်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်.
ကျေးဇူးပြု၍ သင့်ရဲ့ စိတ်ကူးအကြံဥာဏ်များ အကြံပြုချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့အား လွပ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ဝေမျှပေးနိုင်ပါတယ် - ဖောက်သည်တော်တို့ရဲ့အကြံပြုချက်များ၊ တောင်းဆိုချက်များကို အမြဲတမ်းနွေးထွေးစွာ လက်ကမ်းကြိုလျှက်ပါ.
သိလိုတဲ့အရာများရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့၏အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်. အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ က သင့်ကိုအကူအညီပေးဖို့၂၄/၇ အချိန်ပြည့်ရှိနေပါသည်.